काबुल एयरपोर्टमा आक्रमण गर्ने चेतावनीपछि ७ जनाको मृत्यु, के छ अबस्था ? — Imandarmedia.com
काबुल एयरपोर्टमा आक्रमण गर्ने चेतावनीपछि ७ जनाको मृत्यु, के छ अबस्था ?
काबुल । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्ना नागरिकहरुलाई काबुल विमानस्थल नआउन चेतावनी दिएको छ। अफगानिस्तान स्थित चरमपन्थी इस्लामिक समूह आइएसले आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी दिएको भन्दै अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई सजग गराएको हो।
बीबीसीका अनुसार शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी अमेरिकाले त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकलाई सजग रहन भनेको छ। अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिको साथमा मात्र यात्रा गर्न भनिएको छ। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीले त्यस्तो खतरालाई आफूले निगरानी गरिरहेको र वैकल्पिक बाटोको खोजीमा रहेको बताएका छन्।
तालिबानले सत्ताकब्जा गरेपछि हाल एयरपोर्टमा देश छाड्नेहरुको भिड छ। त्यस क्रममा त्यहाँ हिंसाका घटना पनि भइरहेको खबर आइरहेका छन्। एयरपोर्टको टर्मिनल बाहिर लगातार हंगामा मच्चिएपछि अमेरिकाले शनिबार यो सल्लाह जारी गरेको छ। बेलायती रक्षा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म त्यहाँ ८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
शनिबार एक पत्रकार सम्मेलनका क्रममा अमेरिकी रक्षा विभागले हालसम्म १७ हजार मानिसले काबुल छाडेको र त्यहाँ बाट २५०० अमेरिकीलाई पनि एयरपोर्ट बाट निकालीएको बताएका थिए।
काबुल एयरपोर्ट बाहिर हुलदंगा हुँदा ७ जनाको मृत्यु
काबुल एयरपोर्ट बाहिर हुलदंगा हुँदा कम्तिमा ७ जना अफागनीको मृत्यु भएको छ। शनिबार बेलायती रक्षा मन्त्रालयले यो जानकारी दिएको हो। तालिबानले सत्ताकब्जा गरेपछि देश बाहिर जाने आशामा मानिसहरु विमानस्थल बाहिर जम्मा भएका छन्। मन्त्रालयको बयानमा भनिएको छ, ‘अफगानिस्तानको भूमि अहिले धेरै नै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। तर जतिसक्दो सुरक्षा दिएर सम्हाल्ने कोसिस गरिरहेका छौं।’
हजारौं अफगान नागरिक देशबाट निस्किने प्रयास गरिरहेका छन्, जसले गर्दा काबुलको विमानस्थलमा भागदौड मच्चिरहेको छ। कतिपय अफागनीहरु निशुल्क विदेश जान पाइने आशामा समेत एयरपोर्टमा जम्मा भएका हुन।
यसै गरि, आवश्यक परे तालिबानसँग पनि काम गर्छौँ : बेलायती प्रधानमन्त्री
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आवश्यक परेमा बेलायतले तालिबानीसँग पनि मिलेर काम गर्ने बताएका छन।
उनले भने, म सबै जनतालाई के कुराको विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हामीले आवश्यक परेमा तालिबानसँग पनि मिलेर काम गर्न सक्छौँ, हाम्रो राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रयास भनेको हामीले अफगानिस्तानको समस्याको समाधान खोज्ने हो र हामी त्यसका लागि लागि परेका पनि छौँ।
यदि अफगानिस्तानमा शान्तिको स्थापना हुन्छ, या यहाँको अवस्थामा सुधार आएर समस्या समाधान हुन्छ भने हामीले तालिबानी समूहसँग पनि मिलेर काम गर्न सक्छौँ।
प्रधानमन्त्री जोन्सनले अफगानिस्तानको विमानस्थलमा आफ्नो देश फर्किन चाहने नागरिकको भीडभाड हट्दै गएको र तालिबानीले पनि यसमा सामान्यतया अवरोध नगरेको देखिएको उनले बताए।
जसका कारण अफगानिस्तानको अवस्था विस्तारै सामान्य हुँदै गएको जस्तो देखिएको उनले बताए।तालिबानले महिनौँअघिदेखि देशैभरि आफ्नो नियन्त्रण विस्तार सुरु गरेका थिए र गत अगस्त १५ राजधानी काबुल आएर सत्ता कब्जा गरेका छन्।
शुरुमा विभिन्न बाहिरी प्रान्त कब्जा गर्दै आएका तालिबानीको पछिल्ला दिनमा त्यो गति तीव्र बन्यो र उनीहरूले केही दिनभित्रै अफगानिस्तानभरि आफ्नो नियन्त्रण कायम गरे।यति चाँडै उनीहरु सत्तामा आउलान् भन्ने अनुमान भने नगरिएको अमेरिकी अनुमान थियो।
तालिबानको तीव्र विस्तारका बाबजुद पनि स्वयं अफगान सेनाले नै आफ्ना देशका विरुद्धमा लड्न नचाहेको या नसकेको भन्ने बारेमा पनि अहिले विश्वव्यापी बहस भइरहेको छ।
हाल विश्वका विभिन्न देशले आफ्ना नागरिकलाई अफगानिस्तानबाट फिर्ता गरिरहेका छन्।यसै क्रममा बेलायतले पनि गएको आइतबार यता कम्तीमा दुई हजार आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लगिसकेको जनाएको छ। एजेन्सी